प्रचण्डको भारत भ्रमण हात लाग्यो शून्य, संविधानमा सहमति गराउने प्रयास विफल, १९५० को सन्धिबारे प्रचण्ड मौन किन ? प्रचण्ड कहाँ चुक्नुभयो, हेर्नोस संयुक्त विज्ञप्ति : – Maitri News
प्रचण्डको भारत भ्रमण हात लाग्यो शून्य, संविधानमा सहमति गराउने प्रयास विफल, १९५० को सन्धिबारे प्रचण्ड मौन किन ? प्रचण्ड कहाँ चुक्नुभयो, हेर्नोस संयुक्त विज्ञप्ति :
डा. अजयक्रान्ति शाक्यबाट—
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चार दिवसीय भारत भ्रमण नेपालका लागि उपलब्धिविहीन भएको छ । राजनीतिक,आर्थिक र कूटनीतिक हिसाबले भ्रमण असफल भए पनि उहाँ र भ्रमण दलका सहयोगीमार्फत भ्रमण सफल भएको दावी गर्दै भ्रमको खेती गरिएको छ । राजनीतिक तीर्थाटन मात्र गर्नुभएका प्रचण्डले न भारत सरकारलाई नेपालको संविधानमा समर्थन जुटाउन सक्नुभयो न सन् १९५० को सन्धिकाबारेमा कुरा उठाउने आँट गर्नुभयो । नेपाललाई ऋण बोकाउने तीनबुँदे समझदारीबाहेक अरु उहाँले केही पनि गर्न सक्नुभएन । उहाँका कारण नेपालको परनिर्भरता अरु बढ्ने भएको छ ।
केही मधेसवादी दलको कुरा सुनेर नेपालको नयाँ संविधानप्रति असहमति जनाउँदै भारतले गत वर्ष गरेको पाँच महिनाको नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्दै भारतसित सिधा कुरा राख्नुभएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल र नेपालीको शिर ठाडो पार्ने काम गर्नुभयो तर प्रचण्डले नेपालीको चाहना अनुसार भारतसँग कुनै अडान नै राख्न सक्नु भएन ।
सन् १९५० को असमान सन्धि खारेज गराउनुपर्ने मुख्य मागसहित १० वर्ष सशस्त्र विद्रोह गरी १७ हजार भन्दा बढी नेपालीको हत्या गर्ने, भारतविरुद्ध सुरुङयुद्धको नाटक गर्नुभएका प्रचण्डले न पहिलो भारत भ्रमणका बेला न अहिलेको भ्रमणमा सो सन्धिकाबारे मुख खोल्नुभयो ।
बाहिर चर्का र ठूला कुरा गर्ने तर भारत गएपछि नतमस्तक हुने प्रचण्ड र उहाँका जनयुद्धका सहयात्री डा। बाबुराम भट्टराई कहाँबाट कसका हितका लागि सञ्चालित हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा अब झन् स्पष्ट भएको छ । भट्टराई प्रधानमन्त्री भएर भारत जाँदा पनि असमान सन्धिका बारे कुरा उठाउनुभएन नेपालमा छलफल नै नगरी विप्पा सम्झौता गरी भारतको हितमा काम गरेर आउनुभयो । अहिले उहाँले माओवादी पार्टीलाई भत्केको घर भन्दै नयाँ शक्ति नेपाल खोलेर टाउको टाउको लुकाउने काम गर्नुभएको छ । प्रचण्ड दुई दुईपटक प्रधानमन्त्री बनेर पनि भारतसँग नेपालको हित रक्षा हुने कुनै काम गर्न सक्नुभएन । लिपुलेक विवादबारे पनि एक शब्द भारतसँग राख्नुभएन ।
गत वर्षको अप्ठेरो स्थितिमा भारत भ्रमण गर्नुभएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको स्वाभिमानमा कुनै आँच नआउने गरी भारतसँग सातबुँदे सम्झौता गर्नुभयो । जस अनुसार नेपाल र भारतबीच नेपाललाई भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतले उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको २५ अर्ब रुपियाँ अनुदान र ७५ अर्ब सहुलियत ऋणको उपयोग, तराईमा सडक सञ्जालको विस्तार र संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठान क्षेत्रमा सहकार्य नेपालका लागि काँकडभिट्टा बंगलाबन्ध कोरिडार पारबहन सुविधा, विशाखापट्टनम बन्दरगाह उपयोग, विशाखापट्टनम सिंहबाद रेगमार्गको उपयोग गर्ने सम्बन्धी थिए । गत वर्ष भएका यी सम्भौता कार्यान्वयन गर्न प्रचण्डको भारत भ्रमण केन्द्रित भएको भए नेपाललाई ठूलो लाभ हुने थियो तर ओलीलाई भारतविरोधी देखाएर आफू निकट हुन खोज्नुभएका प्रचण्ड भारतसँग यसपटक नराम्ररी चुक्नुभयो । ओलीले लिपुलेख विवादबारे अध्ययन गर्न एक टोली पनि गठन गर्नुभयो । तर प्रचण्डले सो टोलीलाई नै बेवास्ता गर्नुभयो । लिपुलेक विवादबारे भारतमा एक शब्द पनि खर्चिनुभएन । विगतका गल्ती सच्याएर राम्रा काम गर्ने गफ दिनुभएका उहाँ हतार हतार भारत गएर नेपाल र नेपालीको हितका पक्षमा एउटा पनि उल्लेख्य काम गर्न सक्नुभएन ।
प्रचण्ड भारत गएर विदेश नीतिमा पनि चुक्नुभयो । ओली सरकारले चीनसित नेपालको सम्बन्ध विस्तार गर्न गरेको प्रयासलाई प्रचण्डले ब्रेक लगाउने काम गर्नुभयो । भारतलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् सदस्य बनाउन समर्थन गर्नेदेखि भूकम्पपीडितलाई भारतले सिधै आर्थिक सहायता दिने बाटो खुला गरिदिएर नेपालमाथि थप हस्तक्षेप गर्न सजिलो पार्ने साथै नेपाल र चीनबीचको दूरी बढाउनेजस्तो राष्ट्रघाती काम गरेर आउनुभयो ।
यो भ्रमणको असफलताले उहाँको राजनीतिक भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । सम्भवत यो प्रधानमन्त्रीको अवसर उहाँका लागि अन्तिम हुनसक्छ । नेपाली जनताले अब प्रचण्डलाई राम्ररी चिनिसके । उहाँबारे जनताले नै अन्तिम फैसला गर्नेछन् ।
प्रचण्ड कहाँ चुक्नुभयो, हेर्नोस संयुक्त विज्ञप्ति :